Igcine ukubuyekezwa: Dec. 27 2017 | 5 imiz ufunde
I am a woman, owesifazane owahamba phezu dates eziningi namadoda, emuva dating my izinsuku. Ngakho Ngabona eziningi ukuziphatha ezahlukene, imibono kanye Tindlelanchubo dating. Ngizomenzela ukwabelana nawe Ketha ngaphakathi ngalokho ngempela usebenza amadoda nabesifazane nithandana, futhi yini okumelwe siyigweme like isifo uma ezikhona ngosuku noma ukuxoxa nowesifazane.
Qiniseka ukuthi Prakthiza Lezi Builders Attraction
Romance wakhe – Thina besifazane bakhangwe umuntu ngokusebenzisa ngokuzizwa exhunywe, lokhu okuncane sihluke isebenza kanjani amadoda kakhulu ngiyakholwa. Ngakho singaba ukuhlangabezana indoda futhi abe nomuzwa wokuthi ngaso sonke ukhangwa, Nokho emva kokuchitha isikhathi naye angabenza us phezu thina ngokuphelele awe ngaye. Lokhu kwenzeka ZONKE isikhathi. Ngakho ukusebenzisa lokhu. Romance wakhe. Ungakhathazeki ngalokho okubonakala ubudala usuphelelwe – Angazi owesifazane abangashadile abangeke bazizwe amazing lapho umuntu enakekela ukuba yothando naye. Yena Uzananzelela ukuthi umzamo owengeziwe uya, izimbali, edonsa emuva esihlalweni, ukuthola umnyango nokunye. Ngisho noma ekhanda lakhe wabe ekholelwa kube endala usuphelelwe, enhliziyweni yakhe siyobona nje ancibilike, futhi ukuthi lapho kubaluleke kuwe ukuba nomphumela!
Nikelani ukukhokha - Lokhu ubopha in ngempela ngenhla. Whatever hang-ups onayo mayelana nokukhokha I asikisela ukuzifaka nezinyawo umthethosivivinywa uma ufuna ukuzenza bahle. Ufuna ukwazi kungani? Funda isihloko yami mayelana nokuthi ubani okufanele akhokhe ngosuku lokuqala.
Uncoma wakhe (kodwa hhayi kakhulu) - A encane, kunconywa yangempela uya elide kakhulu ekwenzeni owesifazane azizwe omuhle, futhi kungaba ancibilike ngisho inhliziyo enomoya. Kodwa qaphela kuka-nikwenza. Ungakwazi basibona zingalondekile uma zonke ezinye izwi emlonyeni wakho kuyinto kunconywa.
Sebenzisa fun aphule ice - Dating kungaba nakho esishubile ngenkathi wena ukwazi wakhe kanjalo aphule ice ngokuhlela into izandla and fun, kunokuba bar date ukungezwani wagcwalisa noma dinner ezingasetshenziswa vela more like a interview umsebenzi! Hamba lapha: unique dating imibono nemibono futhi ukufunda lapha: ukuhlela i usuku lokuqala amazing ukuthola indlela yokwakha uxhumano.
Yakha ukungezwani - Isakhiwo Tension and ukudamba kobulili wazama futhi ihlolwe izinqubo Sekuyisikhathi eside esetshenziswa amadoda ukwandisa ukhangwa nowesifazane bathanda. Lokhu akusho ukuthi ube izinambuzane sex, Nokho kancane fun, senzo playful can izinto hot ngempela up. Nokugconwa enye indlela enkulu ukwakha chemistry ngokocansi njengoba nje akusiyo ngokweqisa. I once yango a guy ngubani esetshenziswa lokhu njengendlela yakhe main basebenzisane nowesifazane. Ekuqaleni kwaba fun, kodwa emva kwehora noma amabili kwaba plain kuyakhathaza. Futhi, ingxenye yokwakha ukungezwani iwukuhlale ukuphila kwakho siqu kanye ukuzimela, ngisho uma ina a woman.
Gwema Lezi Mistakes Dating
Ukuba whiney - Abantu abenza umkhulungwane ngokweqile izinto a turn onjalo off. Ngokuzimisela. Ngiyaqiniseka ukuthi bangayiqonda uma omaziyo Moans sonke isikhathi. Ungase ucabange ukuthi akuwona yini, Nokho, nje hlola kulelo. Ngezinye izikhathi thina ngiyagquma futhi umkhulungwane lingazi nokwazi ukuthi. Ingabe ungathanda ukukhononda nabantu abashade yakho? Ingabe ngiyagquma mayelana: isimo sezulu, Umsebenzi wakho, isimo umnotho, abesifazane wena usuku? Kungenzeka basuke uma nenza it nabangani bakho bese wenza it uma nithandana, futhi kungaba sina umuntu wesifazane off. Yibani abazi ukuthi ukhuluma ngani nezinsuku zakho, futhi ulimi usebenzisa.
Ukubonisa yokungazethembi ezinkulu - OK kanjalo sonke sibe ezinye nokungazethembi, futhi Angiyena omunye for Bottling up imizwelo, Nokho usuku lokuqala akuyona indawo ukuze baveze yokungazethembi yakho mayelana ngabe kwabobulili obuhlukile ngaso, ngoba ngiqinisile ngithi kini ukuthi ngeke ube uma nenza lokho! Owesifazane uyinqaba angase akuthole ezithandekayo Nokho ukuthi kungaba nelinani sína. Kwabesifazane abaningi lokhu bayoba us egijima kubanda. I once yango a guy abaqala bangibuza ukuthi Ngangicabanga ukuthi ezikhangayo ngosuku lokuqala, futhi indlela akazange yangibonisa kuyeza esendaweni yokungazethembi. Wayengeke uphonsa. Wayelokhu ebuza kimi, akazange I ngimthole ezikhangayo? Wabe eseqala ethi kwakungekho dating iphuzu uma angizange ngisithole ezikhangayo futhi efika ngempela funny ngakho. The iqiniso ngangisafunda akha engqondweni bami indlela engangizizwa ngayo (khumbula ukhangwa iyehlukahluka kithi besifazane) Nokho nge isikhathi ngasinye lapho okukhulunywa khona ukukhangana bami behlela. Ngempumelelo wakhuluma ngokwakhe out of ukuthola omunye usuku. Bala nezindaba zakho in therapy, noma ekhaya nguwe, hhayi ngezinsuku. Futhi phawula - nokungazethembi nemizwelo zihlukile!
Bitching mayelana ex yakho - Lokhu kimi ingenye ezashiywa isikhathi kakhulu kunazo futhi ngiyofakwa off a guy omuhle ngokushesha okukhulu chocolate liyancibilika ngosuku hot. KULUNGILE, ngakho ex wakho enkulu b * tch in the world lonke, bashiya wena Broken Hearted nezingane ezinhlanu ukuze bakhuphule, kodwa owesifazane othandana naye akazi yini kodwa. Uma uqala ezimbi mouthing ex yakho izophila beka ngaphezulu ukuze ex yakho kunawe. Kanti yena ngeke sikhathazeke izahlulelo wena uyokwenza ngaye. Ukhuphula ex sika ekuqaleni dating ifomu nje kubi futhi ngokupheleleyo okungadingekile (Empeleni ngenza icala kuhle ukuletha ex luka ebuhlotsheni bakho njalo!) Okusemqoka ungubani MANJE, nentokazi phambi kwakho.
Ukuba ezinkulu hang ups (lezi ibukeke namafulege abomvu kithi!) - Bona zonke ngenhla. Hang ups kungaba futhi zihlanganisa ranting mayelana nezinsuku esabekayo ubulokhu on, ukhononde ngokuthi uye hhayi ngokuthi yini ngoba kukwenza ungazethembi, slagging off zonke izinsuku ubulokhu on, nokugquma mayelana okhokhela njll. Sekuyisikhathi sokubeka big boy ibhulukwe yakho phezu. Ngezinye izikhathi ukuphila angabona okungenaqiniso, kodwa uma ufuna ukuqhubeka game dating ngezinye izikhathi kufanele nje ncela it up! Kungenjalo uyoba nje isitshulu in ayo yakho siqu. Ngithemba ukuthi ukhetha ukuphuma khona, uphonsa hang-ups and bajabulele nithandana the fun, ezingalindelekile, futhi ngezinye izikhathi okwenzeka crazy kungaba.
Futhi ekugcineni ...
Khohlwa zonke ngenhla futhi nje kube ngokwakho! - Yes I ngempela ngithi nje ukuthi. Ukufunda kanye ezilandelayo izinhlu iziqondiso ngezinye izikhathi kukwenze abantamo futhi nemvelo ngezinsuku. Ngakho nakuba mkhulu ukufunda iseluleko futhi sigxile phezu ukuvumela ukuba icwile it, musa iyakhathazeka ngokuthola it ephelele. Thatha wonke niyaphola iseluleko isiqondiso kunokuba okumelwe ngokuphelele. Zama zinto ngokwakho futhi ngaphezu kwakho konke khumbula nje uphumule futhi nijabula!